STEP Democracy UEC
Getting ready for the 2020 general election
With Myanmars general electionalittle over two years away, now is the time for the Union Election Commission to analyse and review its existing processes, and suggest changes to the electoral management system. STEP Democracy partner International IDEA, is supportingareview of Myanmar’s Campaign Finance guidelines and Advance Voting regulations.	Read More
၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစီးသည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွက် လက်ရှိတည်ဆဲလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ်ကို ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရမည့်အချိန်ကာလသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ရှေ့သို့မြန်မာအစီအစဉ်၏လုပ်ဆောင်သူမိတ်ဖက် International IDEA သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကြိုတင်မဲပေးခြင်းစည်းမျဉ်းများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။	Read More
International IDEA ၏ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ သြဂုတ်လအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲများပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်း။	။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတို့အား အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှာ နှိုင်းယှဉ်ရလျှင် ဒီမိုကရေစီမဆန်သေးသောအနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၏တောင်းဆိုမှုအရ International IDEA သည် စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဘောင်များအပေါ်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်စီစစ်ချက်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဘောင်တို့အပေါ်လေ့လာသုံးသပ်ချက်တို့အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ IDEA သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအားရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်အားပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာထားသည့်အချက်အလက်များပါဝင်သော သုံးသပ်ချက် ၃ စောင်ကို ပြုစုခဲ့သည်။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်များသည် နိုင်ငံသားအားလုံး၏မဲပေးပိုင်ခွင့်၊ ရှင်းလင်းသောမဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများအားဖြေရှင်းကိုင်တွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အထူးပြုအခြေတည်ထားသည်။ IDEA သည် လက်ရှိတွင် စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများကိုပြောင်းလဲရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဖွဲ့တို့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရွေးကောက်ပွဲအား ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။	Read More
International IDEA Activities: July – September 2017
Reforming Municipal Elections in Yangon: Although Myanmar has held successful national elections (2015) and by-elections (2017), municipal politics have remained comparatively undemocratic. At the request of the Chief Minister of Yangon, International IDEA is providingacomparative analysis of municipal electoral frameworks and an analysis on the current electoral framework for the Yangon City Development Committee (YCDC). IDEA has previously produced3analytical reports with comparative information to promote informed discussion of alternatives for reform to the electoral system used to elect the YCDC members. These emphasize universal suffrage, clear campaign finance regulations and dispute settlement procedures among others. IDEA is now working with the Mayor of Yangon and the YCDC Legal Reform Team to incorporate changes in the law that regulate municipal elections. It is anticipated that YCDC elections will be held in 2018.	Read More
Union Election Commission Visits Germany Ahead of German National Elections (PRESS RELEASE)
Germany’s much-anticipated national elections will be held on September 24. Yesterday, Myanmar’s Union Election Commission (UEC) beganavisit to Germany to learn first-hand how this election of 60 million voters is organized, to observe the campaign, as well as the voting and counting on Election Day. The trip is supported by the European Union through the STEP Democracy programme in Myanmar (www.stepdemocracy.eu), implemented by International IDEA and partners.	Read More
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဦးဆောင်သူများက International IDEA မှ ကျွမ်းကျင်သူများအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကြောင်းအရာများဖန်တီးရေးသားခြင်း၊ လုပ်ငန်းများစီစဉ်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာဒေသများရှိ (ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာစသည့်) အဆင့်အားလုံးရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကော်မရှင်ခွဲများမှဝန်ထမ်းများအား ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။	Read More
အောင်မြင်သည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရန် နိုင်ငံရေးပါတီများအား DIPD မှပံ့ပိုးကူညီ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသစ်လက်ထက် ပထမဆုံးအကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲအား ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား အမျိုးသားအဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် လစ်လပ်နေရာ ၁၉ ခုအတွက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကာ နိုင်ငံရေးပါတီများစွာကို မိမိတို့၏မဲဆန္ဒနယ်အားကိုယ်စားပြုစေနိုင်ခဲ့ပြီး ကောင်းစွာစီမံခန့််ခွဲနိုင်ခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။	Read More